ကျနော့်အမြင် လူနှင့်ကမ္ဘာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Think Tank » ကျနော့်အမြင် လူနှင့်ကမ္ဘာ	12
Posted by nicolus agral on Jul 29, 2016 in Think Tank | 12 comments
တိုးတက်ဖွံဖြိုးပြီးလူသားများသည် ကင်ဆာဖြစ်သည် သို့ virus ရောဂါဖြစ်သည်
တိုးတက်မှုနည်းသော လူသားများသည် ဂေဟစနစ်ဖြစ်သည်
nicolus agral says: global catastrophic risk
university of oxford suggested 19% chance of human extinction over the next century
Molecular nanotechnology 5%
Non nuclear wars 4%
nicolus agral says: လူ ၇ သန်းအောက်ပဲကျန်သင့်တယ်
၀့ ၅ သြစတေးလျ
မြစပဲရိုး says: AI တွေ ဟာ လူ တွေကို ပျက်စီးစေ မယ်လို့ Bill Gates ပြောခဲ့ဖူးတာ သတိရမိတယ်။
သို့ပေမဲ့ အခု လောလောဆယ် မှာတော့ ရိုဘော့ တွေကို ကြောက်ရမှာထက် အစွန်းထွက်စိတ် နဲ့ လူ တွေ ကို ပိုကြောက်နေရပါကောလား။
ဒီအတိုင်းသာ ပိုပိုစွန်းလာလို့ကတော့ နောက် ၁၀ နှစ် တောင် မကြာဘူး။
အားလုံး ခက်ကုန်မယ် ထင်ရဲ့။ အမေရိကားမှာ ဒေါ်နယ်ထရမ့်ပ် အာဏာရပြီး ပူတင် နဲ့ ပေါင်းလိုက်ရင်တော့
အဲဒါဟာ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ Turning point ဘဲ။
အကောင်းအဆိုး who knows !!!
ဂျစ်စူ says: ကမ္ဘာကြီး ဘလောက်ကျန်းမာ ကျန်းမာ
လူသားမရှိလဲ အလဂါး ကမ္ဘာကြီး ဖြစ်မှာပေါ့နော်
မြစပဲရိုး says: ကျေးကျွန်မျိုးနွယ် တွေ ကျန်မတဲ့ စိန်ပေါက်လေး။
nicolus agral says: ကမ္ဘာကြီးက လူသားတွေတစ်မျိုးတည်းအတွက်မှမဟုတ်တာ
လူဆိုတာ သန်းပေါင်းများစွာသော သက်ရှိမျိုးစိတ်တေထဲကတစ်ခုပါ
Homosapiens အုပ်စုဝင် သက်ရှိတစ်မျိုးလေ
အောင် မိုးသူ says: ကိုင်းကျွန်းမီ ကျွန်းကိုင်းမီ လို့ပဲ ထင်မိ
မမချွိ says: ကျောက်ခတ် ပြန်ရောက်ပါဇီ။
ဒါမှ နာ ကြိုက်တဲ့သူကို တင်းပုတ်နဲ့ထုပြီး ကျောက်ဂူထဲ တရားဝင်ခေါ်လို့ရမှာ။
Foolish Girl says: တမှီးလေးတော်တယ် ၁မှတ်
kai says: အဖြူ..မဟုတ်လျှင်… အမဲ… မဖြစ်သင့်..
၀င့်ပြုံးမြင့် says: ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လူဦးရေ ထိန်းချုပ်မှု လုပ်သင့်ပါပြီ
Thint Aye Yeik says: အမှန်တော့ ဒီကမ္ဘာလောကထဲမှာ… သွေးတစ်စက် ရေတစ်စက်ထဲမှာကအစ..သတ္တဝါပေါင်း သိန်းနဲ့ သန်းနဲ့ချီ…ရှိနေတာ..။ တခြား တောနေ သတ္တဝါ…ရေနေသတ္တဝါ လေ နေ သတ္တဝါ… စသည်ဖြင့် အများကြီး..ရှိတဲ့အထဲမှာက.. လူဆိုတဲ့ သတ္တဝါက… အကောင်ရေမှ သန်း ၇ထောင် လောက်လေး..ရှိတာ။ အဲ့လောက် အကောင်ရေ နည်းတဲ့ လူ ဆိုတဲ့သတ္တဝါတွေကြောင့်…ဒီကမ္ဘာကြီး ပျက်စီးလာရတယ်ဆိုတာက…
ဆန်းတော့ဆန်းတယ်။ တခြား သတ္တဝါတွေကို အားနာလိုက်တာ…။ တခြားသတ္တဝါတွေသာ..တွေးတတ် ရေးတတ်ရင်…လူဆိုတဲ့သတ္တဝါကို ကမ္ဘာဖျက်သတ္တဝါတွေအဖြစ် ပြောကြ ရေးကြမှာ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.